၉၆၉ တဲ့လား… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » ၉၆၉ တဲ့လား…
Posted by ေၾကာင္၀တုတ္ on Apr 9, 2013 in Complaint / Claim, My Dear Diary | 24 comments
ကိုသုရှင်ရဲ့ ၉၆၉ ပိုစ့်လေးထဲက –
စင်စစ်သော်ကားမြန်မာနိုင်ငံတွင် ၉၆၉ ဟူသောအဖွဲ့မရှိပါ။ ( မရှိသေးပါ) လွန်ခဲ့သော ၁ဝ စုနှစ် နှစ်ခုလောက်က သာသာနာရေးဒုဝန်ကြီး ဦးကျော်လွင် မှ တီထွင်ထားသော ဂဏာန်းဖြစ်ပြီး ၊ မွတ်စလင်တို့၏ ၇၈၆ ဟူသော ကိန်း ဂဏာန်းကို အတုခိုးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဦးဝီရသူ က the voice daily newspaper နှင့်အင်တာဗျူး တစ်ခုတွင် ပြောကြားသည်ကို ဖတ်လိုက်ရပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ၉၆၉ သည် ဘုရားဂုဏ်တော် နှင့်ဆိုင်သော တရားဂုဏ်တော်နှင့် ဆိုင်သော ၊ သံဃာ ဂုဏ်တော်နှင့် ဆိုင်သော သင်္ကေတ တစ်ခုဖြစ်သည်ကို မှု မြန်မာတို့ရင်ထဲတွင်ရှိသည့်အတွက် မွတ်စလင်တို့ ၏ အကြောင်းမဲ့စွတ်စွဲထင်မြင် နေမှုများသည် ပဋ္ဋိပက္ခများကို ငြိမ်းစေမည်မဟုတ်ပဲ၊ ပဋ္ဋိပက္ခကို ပိုပြီးလောက် ကျွမ်းစေရန်လောင်စာများပင်ဖြစ်သည်ကို ထည့်တွက်သင့်ပါသည်။
အဲ့ အပိုဒ်လေးတွေ့တော့ ပရောဂမှန်လို့တုန်ဆင်းလာတယ်လို့ပဲပြောပါတော့… ၉၆၉ အကြောင်းကို ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဆွေးနွေးခဲ့ဖူးပါတယ်…
အော်… ဒါနဲ့ ဒီပိုစ့်ထဲမှာ 18+ ကိစ္စလေးတွေနဲနဲပါမယ်ဗျာ… မပြောမဖြစ်လို့ပြောရတာပါ… ခွင့်လွှတ်ပါလို့ ကြိုတင်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်…
အဲဒီလိုပဲ ဒီပိုစ့်က ဘာသာရေး… လူမျိုးရေးပုပ်ခတ်စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူး… အမြင်မတော်တာ ဖြစ်သင့်တာကိုဆွေးနွေးတယ်လို့ပဲ မြင်ပေးကြပါ…
တစ်နေ့ ပြင်သစ်ကလာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ မြို့ထဲသွားတယ်…
လမ်းမှာ ကားတွေမှာ ၉၆၉ စတစ်ကာလေးတွေကပ်ထားတာ သူမြင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်…
အဲဒီလိုနဲ့ ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ လမ်းကထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဝင်စားဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ… အဲဒီဆိုင်မှာလဲ ၉၆၉ စတစ်ကာလေးကပ်ထားတာတွေ့ပြန်ရော…
အဲဒီမှာ ပြင်သစ်ဆြာလေးက… အဲဒီစတစ်ကာက ဘာတံဆိပ်လဲ အပေါ်မှာဘာရေးထားတာလဲလို့ ကျွန်တော့်ကို မေးပါတော့တယ်…
ကျွန်တော်လဲ အနောက်က သာသနာ့အလံတော်… အဲဒီအပေါ်မှာပဌာန်းစက်ဝိုင်းနဲ့ အာသောကကျောက်တိုင်က ခြင်္သေ့ရုပ်ထုနဲ့
ဂဏန်း ၉၆၉ ရေးထားတဲ့ ဘာသာရေးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပါလို့ မီးကျိုးမောင်းပျက်အင်္ဂလိပ်စာလေးနဲ့ တတ်သလောက်မှတ်သလောက်
အဲဒီမှာ သူပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းက ကျွန်တော့်မျက်လုံးတောင်ပြူးသွားစေတယ်ဗျာ…
သာသနာ့အလံတော်ကိုလဲလက်ခံပါတယ်… ပဌာန်းစက်ဝိုင်းနဲ့ ခြင်္သေ့ရုပ်ကလဲ အဆင်ပြေပါတယ်တဲ့…
ဒါပေမယ့် အဲဒီဂဏန်း ၉၆၉ ဆိုတာကြီးက တစ်မျိုးကြီးပဲလို့ပြောပါတယ်…
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့… 969 ဆိုတာ… 69 နဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်တဲ့… မြတ်စွာဘုရား…
ကဲ… 69 ဆိုတာ ဘာကြီးပါလိမ့်…
ယောင်္ကျားနဲ့ မိန်းမ သံဝါသအမှုပြုရာ ခန္ဒာကိုယ်အနေအထားတစ်ခုပါတဲ့… သေချာသိလိုရင်… အောက်ကလင့်ကို ဖတ်လိုက်ပါ…
အဲဒီထက်ပိုဆိုးသွားတာက 969 ဆိုတော့ အော်ဂီ (Orgy)ပေါ့တဲ့… ပြသနာက ပိုရင့်လာပါပြီ..
အော်ဂီဆိုတာတော့ နှစ်ဦးနှစ်ယောက်ထက်ပိုပြီး… အုပ်စုလိုက်သံဝါသအမှုပြုရာလို့ ဝိခိပီးဒီယားကဆိုပြန်တယ်…
အဲဒီတော့ ရုံးပြန်ရောက်တာနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ၉၆၉ ကိုနိုင်ငံတကာကလူတွေအမြင်မှာ ဘယ်လိုရှိသလဲလို့ မွှေနှောက်လိုက်တော့…
Urban Online Dictionary က… အောက်ပါအတိုင်းဆိုပါသတဲ့…
ကျွန်တော်တို့ အကြီးအကျယ်လွဲပါပြီ… လူတစ်ဦးတစ်ယောက် ဝါးလုံးခေါင်းထဲလသာတဲ့အမှုကကြီးပါပြီ…
နောက်တစ်ခုက အစ်မသဲနုအေးပြောသလို… ၇၈၆ ဆိုတာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံထဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး…
တကမ္ဘာလုံးကလက်ခံထားတဲ့ အစ္စလာန်ဘာသာရဲ့ဂဏန်းသင်္ကေတပါ…ဘာအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာထက်… နိုင်ငံတကာက 786 ဆိုရင် ဟိုးအရင်ကတည်းက အစ္စလာန်ဘာသာနဲ့တွဲသိပြီးသားပါ…
တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တင်ဆောင်ခွင့်ဥပဒေတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စေ… အခြားသောအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ…
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တတွေ ၉၆၉ ကိုပွဲထုတ်ကြတယ်… အခုနှစ်အပိုင်းအခြားမှာ မြန်မာပြည်ကို နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေအလုံးအရင်းနဲ့
ဝင်လာကြတယ်… သူတို့တွေရော… ဘယ်လိုမြင်ကြမလဲ… ဘယ်လိုထင်ကြမလဲ… ဘယ်လိုတွေးကြမလဲ…
အဲဒီနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေ သူတို့ဌာနီပြန်သွားတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ သူတို့ဘာသာရေးသင်္ကေတဂဏန်းက 969 တဲ့ဟေ့လို့…
တကယ်တော့ ဘယ်သူမပြုမိမိမှုဖြစ်နေပြီ… ” Little knowledge is dangerous” ပါ…
အဲဒီလိုပဲ အဲဒီ 69 တွေ 969 တွေဘယ်ကလာလဲဆိုရင်…
(၂) ရာစုနှစ်လောက်က အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေရဲ့ ကာမရွှတ်တြ (Kama Sutra)လို့ခေါ်တဲ့ကျမ်းတစ်ခုကနေဆင်းသက်လာတာပါတဲ့…
ဒီလိုစာကိုရေးလို့ ကျွန်တော်ဘာသာရေးစော်ကားတာမဟုတ်သလို… လူမျိုးရေးထိပါးတာလဲမဟုတ်ပါဘူး…
ကျွန်တော်တို့လူမျိုး ပညာမတတ်လို့… ပညာရေးမကောင်းလို့… ဗဟုသုတမရှိလို့… နိုင်ငံတကာအမြင်မှာ အရှက်ရစရာဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီ…
အာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့… လူ့အခွင့်အရေးမရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ရယ်… တိုင်းပြည်ထဲမှာ အလုပ်မရှိလို့ နိုင်ငံခြားထွက်ပြီး…
သူများတွေမလုပ်ချင်တဲ့ အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့ လူမျိုးရမယ်လို့… မျက်နှာငယ်ခဲ့ရပြီးပါပြီ…
အခုလဲ အမှတ်မထင်လုပ်ရပ်တစ်ခုအတွက်… လူမျိုးဘာသာ… အရှက်ရမယ့်အရေးမို့…
သံကိုယ်ကြပ်အကျီ င်္ဝတ်… သံခမောက်ဆောင်းပြီး….
အောင်မယ်လေး စောကတဲ က ၉၆၉ ကို အတိုက်အခံလုပ်လာတာ။ ဖက်ကက်ပြောမှပဲ လုံးဝရှက်စရာပါ လား။ ဒီကဘုန်းကြီးတွေ ဒါကိုမသိဘဲဆော်နေကြတာ။ အမြန်တားဆီးသင့်တယ်ထင်တယ်နော်။ ဖက်ဖက် ကက်ပြောသလို သေချာလေးရှင်းပြပြီး မသင့်တော်ကြောင်းလေးပေါ့။ တကယ့်ကို အဖိုးတန်ဆောင်းပါးပါ။ ၇၈၆ ကတော့ အမကို မွတ်ဆလင်တယောက်က ပြောပြလို့ ရေးလိုက်တာ။ သူကလဲ မယုံကြည်ဘူးတဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမကတော့ အစကတဲ က ကိုယ့်တံဆိပ်ကိုယ်ရှိနေလို့ သူများနဲ့တုစရာမလိုဘူးလို့ယူဆခဲ့တာ။ ကားမှာကပ်ခိုင်းတာတောင် မကပ်ခဲ့ဘူး။ ဖက်ဖက်ကက်ပြောသလိုဆိုသေချာရှင်းရတော့မယ်။ မြတ်ချွာဖျား။
တစ်ခုလောက်တော့ ပြောပြောခွင့်ပြုပါ။ မြန်မာမှာ လူကြီး၊ ဆရာ ဆရာမရှေ့မှာ ကျောင်းသား ကလေး လူငယ်တွေ လက်ပိုက်တာဟာ ယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်တယ်။ အဲဒါကို စာရေးသူပြောတဲ့ နိုင်ငံခြားသားရဲ့တိုင်းပြည်က ရိုင်းတယ်သတ်မှတ်လို့ ကိုယ့်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကို ရိုင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီး မြန်မာတွေမလိုက်နာပဲ သူပြောတဲ့ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတဲ့ အပြုအမူကိုလိုက်နာရမှာပါလား။ အရောင်တွေကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တာကိုပဲ ကြည့်ပါဦး အမျိုးမျိုးဖွင့်နေကြတာမဟုတ်ပါလား။ ဘာသာရေးမှာလည်း ဒီလိုပဲ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အယူအဆတွေ လိုက်နာပုံတွေမတူကြပါဘူး။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အခု ၉၆၉ ဆိုတာက ရတနာသုံးပါးရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေကို ကိုယ်စားပြုထားတာပါ (ဘုရားဂုဏ်တော် ၉ပါး၊ တရားဂုဏ်တော် ၆ပါးနဲ့ သံဃာဂုဏ်တော် ၉ပါး) ပါ။ သူပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဂဏန်း 69 မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာဂဏန်း ၉၆၉ ပါ။ သူ့ဘာသာ သူတို့အင်္ဂလိပ်ဂဏန်း 69 ကိုကြိုက်သလိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါစေ ကျမတို့မြန်မာဂဏန်း ၉၆၉ ရဲအဓိပ္ပါယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ သူတို့ အင်္ဂလိပ်ဂဏန်းကို ယူသုံးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့မြန်မာဂဏန်းကိုပဲ အသုံးပြုထားတာပါ။ သူများယောင်တိုင်းလိုက်ယောင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ရတနာသုံးပါးဂုဏ်တော်တွေကို ရည်ညွှန်းထားတာကို စော်ကားသလိုဖြစ်နေလို့ပြောခြင်းပါ။
ကိုး ခြောက် ကိုး( ၉၆၉ ) နဲ့ နိုင်း စစ် နိုင်း (969) သပ်သပ် စီ လို့ သဘောပိုက် လိုက်တယ်။
၉၆၉ ဆိုတာဟာ 969 လို့ ဘာသာပြန်လို့ရပေမဲ့။ 969 ဆိုတာကတော့ 69 မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ အဲနောက်ဆုံး
ဒီလူတွေက ၆၉/69 လို့ အမည် ပေးခဲ့ရင်တောင်မှ သိသူများအတွက် ပြုံးစရာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အဲဒီ 69 ဟာ ထိုကဲ့သို့ သံဝါသပြုတဲ့ သင်္ကေတ တစ်ခုအနေနဲ့ တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတာ မဟုတ်ပါ။ အနောက်တိုင်းသား လူငယ်များ တစ်ချိန်တစ်ခါက slang ကဲ့သို့ သတ်မှတ်ခဲ့သော အမှတ်အသားတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ် လို့ထင်ပါတယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာ စကားနဲ့ဆိုရင်ကော 69လို့ ခေါ်ထားတာရှိလို့လား။ အဲသလိုသာ စာတွေးမတွေးပဲ နှာတွေး တွေးနေရင်တော့ 86 သည်လည်း အဲသလို အထဲမှာပါနေ နိုင်ပါတယ်။ ထပ်တွေးမိရင် 89 ဆိုတဲ့ သင်္ကေတ ကတော့ ပိုပြီးတော့တောင် ကြမ်းအုံးမယ်။ 89 ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်ကိုတော့ သွားမကြည့်နဲ့နော် သုံးလေးခေါက်လောက်သွား ကြည့်ပြီးရင်
ဗိုင်းရပ် တွေဘာတွေဝင်ရင်ဝင် ဒါမှမဟုတ် browser ဖွင့်တိုင်း မဟုတ်ကဟုတ်က pop up တွေတက်လာလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင်ခံလိုက်ရလို့ ပြောတာနော် :harr:
ကျွန်တော် ဘာသာခြား၁/၂ ယောက် ကို ၇၈၆ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးကြည့်တယ်။ မသိကြပါဘူး။ ရှိရင်ရှိမယ် ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ လူတိုင်းဖောဖောသီသီသုံးနေတဲ့ အရာတော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ထင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကလွဲ လို့ နိုင်ငံခြား ဆိုင်တွေမှာတောင် အဲသလို ရေးထားတာ မတွေ့မိပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်လို Halal ရေးရင်ရေး အာရပ်လို حلال (မှန်ချင်မှမှန်မယ်) ဟာလာ ရေးရင်ရေးမယ်။
မြန်မာပြည်ဆိုရင်တော့ မြန်မာမူဆလင်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူစွာ သတ်မှတ်ရင် မြန်မာလိုလည်းရေးပေါ့ဗျာ။ အတင်းအကြပ်ရေး ရမယ်ပြောတာ
မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဘယ်နံပါတ် ကိုမှ အားပေးနေခြင်းမဟုတ်ပါ အတွေးလေး တစ်ခုထဲမှာ ချောင်ကပ် မနေပဲ မှန်တာကိုတွေးနိုင်အောင်..ကိုယ့်ထင်မြင် တွေးတောချက်လေးကို ဖော်ထုတ်ပြတာပါ။ အသုံးတဲ့ မယ်ထင်ရင်တော့ ယူသုံးပြီးတွေးကြည့် လိုက်ပါ။ စကားမစပ်..wikipedia, wikianswer & urbandictionary တို့ဆိုတာ လူသုံးများပေမဲ့ တကယ်တော့ တရားဝင် သိက္ခာရှိသော ဆိုဒ်များမဟုတ်ကြပါ။ ဦးသူဝင်ရေးတဲ့ ဆိုဒ်တွေပါ။
အခုမြန်မာပြည်မှာ မရှိဘူးလို့ ပြောနေတဲ့ rohingya ဆိုတာ ကိုတောင်အဲဒီထဲ ရေးထားတာ ဝင်ဖတ်လို့ရတယ်။ လူတိုင်းလည်း ဝင်ပြင်လို့ရပါတယ်။ အဲဒါတွေထဲ ဝင်ဖတ်ရုံနဲ့တော့ အကုန်လုံး အမှန်တွေလို့ ယူဆပြီး ရပ်မနေစေချင်ဘူး။ အမှားတွေ..လုပ်ကြံရေးထားတာတွေ ပါပါတယ်။ တကယ် မှန်မမှန် သိချင်ရင် ရှာဖွေမှုတွေ ဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်။
စကားမစပ်..အဲသလိုသာတွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့..68/89/69 နှစ်တို့ မှာသေရင်တောင်မှ ကွယ်လွန်သူ့ အသက်ကို အင်္ဂလိပ်သတင်းစာထဲ့ ထည့်ရေးရမှာ ရှက်နေရတော့မှာပဲ။
တော်ကြာသူများတွေက သံဝါသပြုရင်း သေသွားတယ်ထင်နေအုံးမယ်။ :harr:
လူအများလက်ခံရင်… အောင်မြင်မှာဖြစ်ပြီး.. လူအများလက်မခံရင်ကျဆုံးမှာပေါ့…
ဒီလိုခေတ်ကြီးထဲ.. ကမ္ဘာ့အမြင်ကလည်း အမြဲထည့်တွက်ရမှာပါပဲ..
အလံက.. အမေရိကန်တယောက်က..သီရိလင်္ကာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်လုပ်ပေးသွားတဲ့အလံ..။
ဒါကိုမှ.. (တတိယသံဃာယနာတင်ပြီး..) ဗုဒ္ဓဘာသာထဲ..ဟိန္ဒူအငွေအသက်အတွန်းထည့်ဆုံးလို့ ယူဆရတဲ့.. အသောကမင်းကြီးစိုက်ခဲ့တဲ့.. . (ဘာသာခြားတွေအပိုင်းပိုင်းဖြတ်မြုတ်သွားတဲ့) ပြန်ဖော် ကျောက်တိုင်ထိပ်ခေါင်း အမှတ်အသားနဲ့ထပ်ပိတ်တယ်..။
ကျုပ်ကိုသာဒီဇိုင်းအပ်မယ်ဆိုရင်တော့. ၉၆၉ကို.. ဂဏန်းအင်းကွက်နဲ့ချပြီး… လုပ်တယ်..။
ဗမာ့နည်းစစ်စစ်… လက်ရေးစာသားနဲ့..။ :harr:
အဲ..သဂျီးအကြံလည်း မဆိုးဘူးဗျ။ စဓဗဝ လိုအင်းကွက်ထဲထည့်လိုက်ရင်..မိုက်မယ်နော်။
လုပ်တာတော့လုပ်ကြပါ အစွန်းတော့မရောက်စေချင်ဘူး။ နောက် ၉၆၉ ကိုတော့သဘောမကျရိုးအမှန်ပါပဲ အထူးသဖြင့် သူများလုပ်လို့လုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာကြီးကို ကို မကြိုက်နိုင်တာ။ ဘာသာ သာသနာကို အဲ့လိုကာကွယ်မှရမှာတဲ့လား ???????
သံချပ်ကာ အကျီ င်္ဆန့်အောင် ကိုယ်ကိုနည်းနည်းကျုံ့လိုက်လို့ထင်တယ် ကြောင်မော်ဒယ်ဘွိုင်း ဖြစ်နေတယ်။ :harr:
၉၆၉ အကြောင်း လူပြောသူပြောများလို့ နည်းနည်းပါးပါး ကြားဖူးပေမယ့် သူများဘာသာက ဂဏန်းကို တုပထားတယ်လို့ ယူဆပြီး မကြိုက်ဘူး။
အဲဒါဆို ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ဘာအမှတ်အသားရှိသလဲလို့ စဉ်းစားမိတော့ ပိုစ့်တစ်ခုမှာ ကြောင်ဝတုတ်ရေးဖူးတဲ့ အရဟံ ရှိတာပဲ ဆိုတာကို အမှတ်ရမိသွားတယ်။
အမှန်တကယ်တော့ ကိုယ့်ဘာသာရဲ့ အဆုံးအမကို ရင်ထဲက သိနားလည်ပြီး လိုက်နာနိုင်အောင် ကျင့်သုံးနိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့က အဓိကပါပဲ။
ဘုရားအဆုံးအမကို တကယ်သာလိုက်နာခံယူကျင့်သုံးနိုင်ရင် ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်အေးချမ်းမှုကို ရရှိမယ်။
သူတပါးကိုလည်း ပျက်စီးအောင်၊ ဆုံးရှုံးနစ်နာအောင် မနှောင့်ယှက် မဖျက်ဆီးတော့ဘူး။ :buu:
ဆိုတော့ တားပဲ တားရမလား
ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတကာကို ပဲ သိအောင် လုပ်ပေးရမလား
လူကတော့ အပေါ်က ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲ လုပ်ချင်မိတယ်
တစ်ကယ်တော့ အထိမ်းအမှတ် စတစ်ကာတွေထက် တစ်ကယ့်ရင်ထဲမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သေသေချာချာ ထည်ထည်ဝင်ဝင် နေရာယူကြဖို့ပါ…..။ ခုတော့ ဆိုင်းဘုတ်တွေက များပြီး ဘာမှအလုပ်မဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်ပြပါဆိုရင်ဖြင့် ……………………………………………………..????????????????????
ဘာကပ်ကပ် အားပေးတယ်….786 ကပ်လဲ အားပေးတယ်….၉၆၉ ကပ်လဲ အားပေးတယ်…အရဟံ ရေးထားလဲ သဘောကျတယ်…ဗုဒ္ဒံ ဓမ္မံ သံဃံ ရေးထားလဲဖြစ်တာပဲ….ပဉ္စဂုဏံ အဟံ ဝန္ဒာမိ ရေးထားလဲ ဖြစ်တာပဲ…လက်ဝါးကပ်တိုင် ချိတ်ထားလဲ ဘာဖြစ်သေးလဲ…ဈေးဝယ်မလို့သွားတယ်…ထမင်းစားမလို့သွားတယ်…786 တံဆိပ်တွေ့တယ်….ဘာဖြစ်လဲ…ပြန်ထွက်လာတယ်…ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ပါ…အရဟံတွေ့တယ်…၉၆၉ တွေ့တယ်…ဪ…ဒါ ဗုဒ္ဒဘာသာဆိုင်…အားပေးတယ်…ဒါ ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင်လွပ်လပ်ခွင့်လေ…ဘာတံဆိပ် ကပ်ကပ် ဘာကိုသိစေချင်သလဲဆိုတာ ပြတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကပ်တာမို့လို့ ဘယ်လိုမျိုးကပ်ကပ် ဘာဆိုလိုလဲဆိုတာ သိတယ်…နားလည်တယ်…သဘောပေါက်တယ်…ဘာကပ်ကပ် လက်ခံတယ်…ဘာမှ အငြင်းမပွားလိုဘူး…
တမီး မနေ့ကထိ ရှက်ရှစ်နစ် မပြည့်သေးလို့ ဒီနေ့မှပဲလာဖတ်သွားတယ်။
ကိုဂျီးဖက်အတွက် သံချပ်ကာကို ဆိုဒ်မှန်အောင် မှာပေးမယ်။
attach ment says:
‘786’ ဆိုသည်မှာ အာရဗီ (Arbic) စကား ‘Bismillah al-Rahman al-Rahim’ဗစ္စမစ်လားဟေရ်ရဟ်မားနစ်ရ်ရဟီး(မ)။ကို ‘Abjad numerical’ နည်းအရ (စုစုပေါင်းတန်ဘိုး “786”) ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆင်ပြေအောင် ဘာသာပြန်ရလျင် “အကြင်နာတရား၊ မေတ္တာ ကရုဏာ ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော ဘုရားသခင် (Allah- အလာအရှင်မြတ်) ဟု ပြန်ရလျှင် ဆီလျော်မည်။
Abjad numerals စနစ်သည် အာရဗီ ဗျည်း ၂၈ ခုကို ဂဏန်းများသုံးသော နည်းအဖြစ် ၈ ရာစု မတိုင်ခင်မှ စတင်အသုံးပြုသော နည်းဖြစ်သည်။ တစ်မှ ၁၀၀ဝ အထိ သတ်မှတ်ဖော်ပြနိုင်ပြီး အောက်တွင်လေ့လာ နိုင်သည်။ (ဓါတ်ပုံနှင့်တွဲ၍ ကြည့်ရှုနိုင်သည်)။
“Bismillah al-Rahman al-Rahim”
(2+60+40+1+30+30+5+1+30+200+8+40+50+1+30+200+8+10+40) = 786ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာတွေ “လှည်းဝင်ရိုးသံ တညံညံ ပုဂံဘုရားပေါင်း”(ဘုရားပေါင်း ၄၄၄ ၆ရ ၃၃) ကိုမှတ်သလို ခပ်ဆင်ဆင်ပေါ့နော..
KFC ရေ..ဘယ်လိုမှတော့ မအောက်မေ့ပါနဲ့..ခင်ဗျားပိုစ့်ကုို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်တဲ့ သဘောနဲ့ ဝင်ရေးခဲ့ပါတယ်။ အခုဟာကတော့ attach ment ရေးထားတာလေး
ဖတ်ရလို့ သိထားတာလေးပြောရင်း မသိတဲ့ အဖြေလေးတွေများ ရမလားလို့။
ပထမဆုံး ပြောချင်တာကတော့ ၇၈၆နဲ့ပတ်သက်လို့ ဖွဘုတ်ပေါ်မှ မွန်သူရဲကောင်း အမည်ဖြင့်
လူတစ်ယောက် က တခါရေးထားဘူးတာ ဖတ်လိုက်ရတယ် အဲဒီဂဏန်း or Bismallah or Basmala ဟာ
Queen ရဲ့ Bohemian Rhapsody ထဲမှာပါကြောင်း ဒါတောင်မသိကြဘူးလား ပညာမတတ်ကြဘူးဆိုလား ဘာလား ပြောထားကြသေးတယ်။ (သူရေးထားတဲ့ အတိုင်းဖေါ်ပြချင်တာ သွားပြန်ရှာကြည့်သေးတယ်။
မျက်စိပဲမွဲလို့လား..မတွေ့ခဲ့ပါ)။သိသောသူများ ပညာတတ်သူများကို မေးချင်တာက
ဒီလို “အကြင်နာတရား၊ မေတ္တာ ကရုဏာ ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော ဘုရားသခင် ကို
ချီးမွမ်း ထောပဏာ ပြုပါသည်” ဆိုသော လွန်စွာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော အနက်အဓိပ္ပါယ် ရှိသော
ကိန်းဂဏန်း၏အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ ပညာမတတ်သော မြန်မာနိုင်ငံသားများဟာ
နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာ၊ ဘယ်ဘာသာခြားများ၏ လေးနက်စွာ ရှင်းပြခြင်းကို
မခံခဲ့ကြရတာလဲ။ “၂၁ရာစုနှစ်မှာ အုပ်စိုးရမည်တို့”..“မင်းတို့ဘုရားနဲ့ ၂၁ပေါက်ကစားရင်း
နိုင်လို့” တို့ စတဲ့..စိုးရိမ်စရာ/လှောင်ပြောင် ကောလဟာလ စကားများမှလွဲ၍ ဤကဲ့သို့သော ဂုဏ်တော်များဖြင့်
ပြည့်စုံခြင်းကို ဖော်ညွှန်းသည်ဆိုသည်ကို မည်သူမျှ မရှင်းပြခဲ့ပါ။ အများသုံးနေတဲ့စကား
နဲ့ပြောရရင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ အဲ..အခု ပြဿနာတွေကြီးထွား လာတော့မှ
ကျေးဇူးပါ အာရဗီဗျည်းများ ကို ဂဏန်းများသုံးသော နည်းဟာ ၈ရာစုမတိုင်ခင်က စတင်အသုံး
ပြုကြောင်းသိလိုက်ရလို့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီစကားစုကို ရ၈၆ အဖြစ်ပြောင်းပြီး စတင်ပြီး သုံးစွဲနေတာကရော
ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကလဲ ခင်ဗျာ။ ကျမ်းစာထဲမှာရော ဖော်ပြထားသလားခင်ဗျား။
အောက်ကလင့်လေးတွေ သွားကြည့်ပေးပါ ခင်ဗျာ။ ယုံကြည်စိတ်ချ ရသော လင့်များ
မဟုတ်ပေမဲ့ ရ၈၆နဲ့ပတ်သက်လို့ ရေးထားတာ လေးတွေတွေ့ လို့ပါခင်ဗျာ။
ကိန်းဂဏန်းများကို သုံးခြင်း ဗေဒင်ဟောခြင်း စသည်ဟာ အဲဒီဘာသာနဲ့ မကိုက်ညီကြောင်း သိထားပါ
တယ်။ ထိုသို့ ဂဏန်းများဖြင့် ဖော်ပြခြင်းဟာ guilty/against/evil ဖြစ်ကြောင်းကို အဲဒီလင့်တွေ
ထဲမှ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အဲဒါကို ဘာအတွက် မြန်မာပြည်မှာ သုံးနေကြတာလဲ? တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာ မသုံးကြပေမဲ့
သိသလောက်ကတော့ ပါကစ္စန်/အိန္ဒိယ အချို့နေရာများနှင့် မြန်မာပြည်မှာပဲ သုံးနေတာတွေ့ရတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများဟာဖြင့် ပညာမတတ်သူ များသဖြင့် တစ်ယောက်ယောက်က
အထက်ပါမေးခွန်းများ အကြောင်းအရာများကိုသေသေချာချာရှင်းပြနိုင်ရင် အကျိုးများပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးပါ။
KFC ရေ..ခင်ဗျားပိုစ့်ကုို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတဲ့ သဘောနဲ့ ဝင်ရေးခဲ့ပါတယ်။ သံချပ်ကာအင်းကျီ ဝတ်တာ လက်ခံပေမဲ့။ ခင်ဗျားလက်ထဲကဓားကြီးကတော့ လက်ပင်းတောင်ယားလာပြီ အခုဟာကတော့
attach ment ရေးထားတာလေး ဖတ်ရလို့ သိထားတာလေးပြောရင်း မသိတဲ့ အဖြေလေးတွေများ
ရမလားလို့။ ပထမဆုံး ပြောချင်တာကတော့ ၇၈၆နဲ့ပတ်သက်လို့ ဖွဘုတ်ပေါ်မှ မွန်သူရဲကောင်း အမည်ဖြင့်
Queen ရဲ့ Bohemian Rhapsody ထဲမှာပါကြောင်း ဒါတောင်မသိကြဘူးလား ပညာမတတ်ကြဘူးဆိုလား ဘာလား
ပြောထားကြသေးတယ်။ (သူရေးထားတဲ့ အတိုင်းဖေါ်ပြချင်တာ သွားပြန်ရှာကြည့်သေးတယ်..မျက်စိပဲမွဲလို့လား..မတွေ့ခဲ့ပါ)။
သိသောသူများ ပညာတတ်သူများကို မေးချင်တာက
ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကလဲ ခင်ဗျာ။ ကျမ်းစာထဲမှာရော သုံးခွင့်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသလားခင်ဗျား။
ထဲမှ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အဲဒါကို ဘာအတွက်သုံးနေကြတာလဲ? တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာ မသုံးကြပေမဲ့
ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပုံဟာ
အခြားနိုင်ငံ အခြားလူမျိုး အခြားဘာသာ အခြားအစုအဖွဲ့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပုံနဲ့ မတူနိုင်ပါဘူး..
အဲဒါကို ထပ်တူပြုပြီး ပြောဆို ကဲ့ရဲ့ လှောင်ပြောင် ရင် သူ့အလွန် သူ့အမှားသာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါတွေကပ်တာကို သိပ်သဘောမကျပါဘူး။ အပြစ်လဲမဆိုပါဘူး..။
အရည်အသွေးမှန် ဈေးနှုံးမှန် တဲ့ ထုပ်လုပ်ဝန်ဆောင်မှု့လုပ်ငန်းတွေ အသင်းစုဖွဲ့ပြီး အမှတ်အသားတံဆိပ်လုပ်ထားမယ်
(ဘာသာရေးအရ ခွဲထာတာမျိုးလဲ ထည့်ချင်ထည့်ပါ)
အဲဒီတံဆိပ်ကပ်တဲ့ဆိုင်တွေ တက္ကစီတွေ လုပ်ငန်းတွေမှာ
အဲဒီတံဆိပ်ကပ်ပြီးမှ စည်းကမ်းဖေါက်ဖျက်တဲ့ လုပ်ငန်း၊ဆိုင် တွေကို
အမှန်တကယ်နာမည်ပျက်စေမယ့် အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းပြီး လူထုကိုကျေညာမယ် ဆိုတာမျိုးလုပ်နိုင်ရင်…..
အဲသည်တံဆိပ်မျိုးက တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် ပိုအကျိုးရှိမယ်ထင်တာပဲ….
အယ်လ်အေကစားသောက်ဆိုင်တွေမှာ.. A,B,C ဆိုပြီး အစိုးရ Public Health ကလိုက်ကပ်တယ်ဦးပါရေ..။
ဆိုင်ရှေ့မှန်မှာ လူမြင်သာအောင် ကပ်ကိုကပ်ရတယ်..။
.. မြန်မာပြည်က လက်တွေ့ကျကျ အဲလိုလုပ်ဖို့ကောင်းတယ်..။
အဲဒီအပေါ်ကလင်ခ့်မှာ ရိုးမမြန်မာဆိုင်ထည့်လိုက်တာ.. စကိုးလ်၈ဝထွက်လာသဗျ..။
ဘာသာရေးအမှတ်အသား logo အသစ်အဆန်းတွေ ထွင်နေဖို့ ပြိးတော့အခြားဘာသာတွေနဲ့
သူကသာ၏ ငါကသာ၏ ပြိုင်နေဖို့ထက် မိမိဖာသာ လိုက်နာကျင့်ကြံအသုံးချတဲ့သင့်တဲ့
ဘာသာလို့ထင်ပါတယ်….. အဲ့ဒလိုနဲ့ ပြောဆိုဆုံးမလို့ရနိုင်တဲ့လူကို ပြောဆိုဆုံးမပြီး
ဒါပေသိ လောကမှာ လူမိုက်နှင့် လူလိမ္မာ ဘယ်သူကပိုများဆိုရင်တော့…………
လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တာပါ
ခုလည်း အေးဆေးနေချင်တဲ့လူငယ်တွေက ဘာသာပေါင်းစုံပွဲတွေလုပ်ကြ
ငြိ်းချမ်းရေး စတေကာတွေ ဝေကြ တစ်ချို ့တွေကလည်း ဆူပူမှုကိုလုပ်ဖို့အသင့်
ငြိမ်းချမ်းရေးစွာနေချင်လို့ ဘာသာပေါင်းစုံက ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်အလုပ် လုပ်မယ့်လူတွေ
စုပြီးနေပူထဲ လုပ်နေတာတောင် ဖုန်းဆက်ပြီးအဆဲခံရသေးတယ် ဘယ်လိုလူတွေလည်းမသိဘူး။
“ကျွန်ုပ်ကြောင့် လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး အထိကရုဏ်း မဖြစ်ပါစေရ”
ကြောင်ဝတုတ် တဲ့လား…..တစ်နေ့ ပြင်သစ်က လာတဲ့ နှိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့က မြန်မာထမင်းဆိုင် တစ်ခု့မှာ ထမင်းအတူစားနေစဉ်..ထမင်းဆိုင်ကမွေးထားတဲ့ ဝဝတုတ်တုတ် ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကို ပြင်သစ်သားက မြင်တော့ ကျနော် အညာသားကိုမေးတယ် အဲ့ဒါဘာကောင်လည်းပေါ့..အညာသားတို့ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်အဆင့်က A ဆိုတဲ့ အက္ခာတောင် ရွာက လည်းထောက်နဲ့ တူလို့သိ့နေတာ..ဆိုတော့ကား..ခွေးအတစ်ကောင်ကိုအညာက လှည်းကျိုးနင်းမိတဲ့အသံ တနည်းအားဖြင့် ငပိ့သံနှောတဲ့ စကားနဲ့ ရှင်းပြရတာပေါ့..အဲ့ဒါ fat cat ..ခေါ်သဗျာပေါ့..ဆိုတော့..အနှီ ပြင်သစ်နှိုင်ဂံခြားသားဆြာ ကြီးက fat cat တဲ့လား..cat ဆိုတာကို pussy လို့လည်း ခေါ်တယ် ငပိန်းအညာသားရဲ့ မှတ်ထား..မင်းတို့လူမျိုး(ဦးသန့်…ဒေါ်အောင်ဆန်းစု့ကြည်..ကျန်တဲ့ နှိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် ကမာ္ဘသိ့ ပုဂ္ဂုလ်ကျော်တွေ အပါအဝင်နော်) ပညာမတတ်လို့… ပညာရေးမကောင်းလို့… ဗဟုသုတမရှိလို့… နိုင်ငံတကာအမြင်မှာ အရှက်ရစရာဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီ…ခု့မင်းလည်း မှတ်ထား…CAT…ဆိုတာကို PUSSY လို့လည်းခေါ်သေးသကွဲ့..ဆိုတော့ကား…ခု့မင်းနဲ့ငါ တွေ့မြင်ရတဲ့ သတ္တါလေးက မင်းပြောသလို fat cat ဆိုရင် နောက်တစ်မျိုးက fat pussy လို့လည်းခေါ်လို့ရတာပေါ့ကွယ်.pussy ဆိုတာတော့ ငါက မင်းကို ကြောင်လို့ပဲ မှတ်ယူစေချင်တာနော်..အဲ့လိုမှ့ မဟုတ်ပဲ ..+18 တွေ နဲ့မင်းဘာသာ အတတ်ကြူးပြီး မှတ်ယူရင်တော့…ကို့…ဒေါသ..နဲ့ ကိုပေါ့ကွယ်…fat = ဝသော ဖောင်းသော ပြည့်ဖြိုးသော..pussy= အညာသားတို့ကတော့ ကြောင်လို့ အသိ့ဘူးနော်..ဟိုဟာလို့ပဲ ထင်တာပဲ ကိုယ်က ဒီလောက်သိ့တာကိုးဗျ..ဆိုတော့ကား ၂ ခု့ပေါင်းတော့ ကျနော်အညာသား ငပိန်းလေးက ပြင်သစ်ဆြာကြီးစကားကို ဒီလိုတွေးပြီး အထင်ကြီးမှတ်ယူလိုက်ပါတယ် အထင်ကြီးဆို သူကနဂံခြားသားကိုဗျ.(.fat pussy= ပူစီဖောင်းဖောင်းလေး..ပေါ့…)